Solombavambahoaka bory tànana, vao voafidy tao Môzambika, hifantoka amin’ny fanabeazana · Global Voices teny Malagasy
Mércia, 23 taona, no tovovavy tanora indrindra voafidy ho solombavambahoaka.
Voadika ny 07 Febroary 2020 5:12 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, русский, Français, Italiano, Português
ny solombavambahoaka Mércia. Sary nopihan'i José Matlhombe, nahazoana alàlana.
Ao anatin'ireo 250 solombavambahoaka nandray ny toerany tamin'ny 13 Janoary ho ao anatin'ny antenimiera andiany fahasivy ao Môzambika, misy iray mendrika ny hitondràna fanamarihana manokana.
Izy no Mércia Viriato Licá, 23 taona, solombavambahoaka tanora indrindra teo amin'ny tantaran'ny Repoblikan'i Môzambika.
Noho ny tsy fahatomombanana hatrany am-bohoka, tsy misy rantsambatana ambony izy. Ny fitendrena telefaona, fanoratana taratasy, fisotroana rano, fampiasàna solosaina — izany rehetra izany sy ny maro hafa amin'ny zavatra atao dia ilàna sandry sy tànana avokoa, ny tongony no anaovany izany rehetra izany. Tamin'ny 2019, nahavita ny fianarany ambony momba ny lalàna izy tao amin'ny Oniversite Pedagojikan'i Maputo.
Lany tamin'ny anaran'ny Frelimo, antoko eo amin'ny fitondràna ao Môzambika hatramin'ny nahazoana fahaleovantena tamin'ny 1975, solombavambahoaka misolo tena ny mpifidy ao amin'ny faritr'i Tete i Mércia. Ny filoha Filipe Nyusi, izay tafaresaka taminy tao amin'ny Facebook, herintaona talohan'izay, no nanome sosokevitra handrosoana azy ho mpifaninana tamin'ny 2019. Avy eo i Nyusi nanapaka hevitra ny hanampoka azy sy hitsidika azy tany an-tranony, ary avy any no nilazàny fa dia talanjona izy:
(…) mba marina anefa, tena nahatalanjona ahy ity ramatoakely ity. Ny tongony daholo no anaovany ny zavatra rehetra. Noporofoiny tamiko fa tsy misy sakana tsy azo ihoarana eo amin'ny fiainana.
Nandao azy fony kely ny rainy ka ny reniny no nitaiza irery an'i Mércia, izay mbola miaraka miaina aminy hatramin'izao. Na eo aza ny fahasembanana, nolazainy tamin'ny filoha Nyusi fa tsy mahatsiaro ho samihafa amin'ny olona rehetra izy. Ekeny fa misedra olana izy saingy navadiny izy ireny ho tosika sy fahafahana manao zavatra, hoy izy tamin'ny TV Surdo.
Any anaty sehatra fanehoankevitra sasantsasany, atao ho ohatra amin'ny fiezahana / fandresena ny tantarany. Vao haingana no notantarain'ny Voice of America ny fiainany, tao anaty tatitra iray nitondra ny lohateny hoe “Mércia, mpikomy lasa solombavambahoaka”.
Tao anaty antsafa iray niarahana tamin'i Carta de Moçambique, natao nandritra ny andro nanosorana azy ho solombavambahoaka, noresahan'i Mércia ny fikasàny handrisika ireo Môzambikàna tanora haka aingampanahy avy aminy, dia ireo tanora manome ny ankamaroan'ireo vahoaka 28 tapitrisa eo ho eo ao amin'ny fireneny:
Antenaiko ny handray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'ny alàlan'ny fanabeazana sy ny fampidirana an-tsekoly. Mba handrisihana ny tanora tsy hitsahatra ny hianatra satria ny fanabeazana no làlana tsara eo amin'ny fiainana (…) Inoako fa ny fisiako ato anatin'ny antenimiera, dia ho afaka handrisika sy ho lasa aingampanahy ho an'olona maro aho amin'ny alàlan'ny zavatra ho ataoko mandritra ny fepotoana hiasàko. Inoako fa rehefa mijery ahy ny olona ka mahita fa mahavita aho, dia hiezaka koa izy ireo ny hihetsika.
Tao amin'ny Twitter, hoy ilay mpikaroka avy ao amin'ny Human Rights Watch, Zenaida Machado:
Marcia Castela, 24 taona, manana maripahaizana ambony momba ny lalàna, no solombavambahoaka môzambikàna tanora indrindra. Fandresena goavana no sady aingampanahy ho an'ny tanora sy ireo olona manana fahasembanana. Notokanana androany izy sy ireo 249 hafa, taorian'ny fifidianana solombavambahoaka natao ny Oktôbra 2019. pic.twitter.com/I2XelnZy1c
–Zenaida Marchado (@zenaidamz) 13 Janoary 2020
Na nanasonia ny Fifanarahana Iraisampirenena momba ny zon'ny olona manana fahasembanana aza i Môzambika tamin'ny 2010, fifanarahana iray manindrahindra ny famoronana fepetra mendrika kokoa hiainan'ireo olona manana fahasembanana, mbola sarotra ny fiainan'izy ireny ao amin'ny firenena, araka ny nitateran'ny gazety A Verdade azy.
Nifantoka tamin'ny fidirana amin'ireny tranobe sy fiara fitaterambahoaka ireny ireo ohatra noraisina, izay tsy mety ho an'ireo sokajin'olona ireo, ankoatra ny fanavakavahana zakaina anaty toejavatra hafa. Vokany, angatahan‘ny [pt] fikambanan'ireo olona manana fahasembanana ao Môzambika ny hanaovana lalàna iray manokana hiaro ny zon'izy ireo.
Raha naneho hevitra tamin'ny bitsik'i Machado, ny kaomisera ambony britanika ao Maputo, NneNne Iwuji-Eme, nilaza fa Mercia dia aingampanahy, tsy ho an'ny olona manana fahasembanana fotsiny, fa ho an'ireo tovovavy rehetra any rehetra any. “Mila tovovavy betsaka manonofy ny ho lasa mpitarika sy tafita tahaka anao izao tontolo izao,” hoy izy.
Lazain’ilay mpikatroka, Benilde Mourana, fa tena nahafaly be azy ny fanendrena an'i Mércia ary manantena azy tsy “ho toy ireo parlemantera hatrizay” fotsiny ihany izy, fa tena ho aingampanahy tokoa ho an'ny olona:
Faly aho tamin'ny nahavoafidy ho solombavambahoaka an'i Mercia, tovovavy iray manana fahasembanana, sady izao koa, tsy maintsy manomboka any ananonanona any ny fampiatiana. Manantena aho fa tsy ho parlemantera iray toy ny hafa rehetra ihany fotsiny izy fa ho ilay iray hitondra ny tena olan'ny vahoaka ho ao amin'ny antenimiera. Tsy ampy raha i Mercia samirery, aleo avelantsika ny onjan'ny fampiatiana ireo manana fahasembanana mba hiparitaka any amin'ireo sehatra hafa manandanja (…)